အဘယ်သို့ငါဆရာဝန်ကိုသွားပါဘူး? ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်သတင်းအချက်အလက်. | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
အများစုမှာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုအတူကျန်းမာရေးစင်တာများသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများ. သင်သည်သူတို့အကြံပြုတဲ့သူမိတ်ဆွေများနှင့်အိမ်နီးချင်းများတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်. သင်သည်သင်၏ပြန်လည်နေရာချထားရေးရုံးကိုမေးပါသို့မဟုတ်သင်တစ်မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့ဆရာနိုင်ပါတယ် - သင့်နေ့တိုင်းမိသားစုဆရာဝန်.
သင်တို့သည်လည်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများအတွက် RCO database ထဲတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် သင့်ရဲ့မြို့အတွက်. ဤအပေးအတော်များများဒုက္ခသည်များနှင့်အခြားအသစ်ရောက်ရှိလာသောအဘို့နှင့်အာမခံခြင်းမရှိဘဲလူတွေကိုန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်.
အရေးပေါ်အခြေအနေမဟုတ်ပေမယ့်သင်ဆဲဆရာဝန်တစ်ဦးလိုအပျကွောငျးဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များများအတွက်, သငျသညျအရေးပေါ်စောင့်ရှောက်မှုသွားပြီးလမ်းလျှောက်-in ကိုဆေးခန်းနိုင်ပါတယ်. ဤရွေ့ကားမကြာခဏညဦးနှင့်တနင်္ဂနွေနာရီရှိသည်နှင့်ရက်ချိန်းမရှိဘဲစောင့်ရှောက်မှုပေး.
အခြားမည်သည့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြဿနာများအတွက်, ဘုံနာမကျန်း, သို့မဟုတ်တစ်စစ်ဆေးမှုများ-up, သို့မဟုတ်ကာကွယ်ဆေးရဖို့, သငျသညျအဓိကစောင့်ရှောက်မှုဆရာဝန်နှင့်အတူရက်ချိန်းယူရမည်.
သင်ကဆရာဝန်ကြည့်ဖို့ရက်ချိန်းပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သင့်အနေဖြင့်ဆရာဝန်၏ရုံးခန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်ရက်ချိန်းနိုင်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏အင်္ဂလိပ်အကြောင်းကိုဦးနှောက်အာရုံကြောရောက်နေတယ်ဆိုရင်, အဆိုပါဖုန်းခေါ်ရန်သင့်ကိုကူညီပေးဖို့မိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးမမေးသို့မဟုတ်သင်နှင့်အတူဆရာဝန်ကိုသွား. သင်တို့သည်လည်းထိုသူတို့နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်သင့်အားကူညီရန်အတွက်ဖုန်းပေါ်မှာတစ်ဘာသာပြန်ဆိုသူရဖို့ရုံးတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်. ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်မည်သို့မည်ပုံအဘို့ကိုအောက်တွင်ကြည့်ရှုပါ.
အဆိုပါဆရာဝန်၏ရုံးခန်းသင့်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်တောင်းပါလိမ့်မယ်. သင်၏ကျန်းမာရေးအာမခံသတင်းအချက်အလက် (သငျသညျအာမခံရှိပါက) သင်၏ကျန်းမာရေးအာမခံကဒ်ပေါ်မှာ.
အဖွဲ့ဝင် ID ကို # (ဤသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကဒ်၏မျက်နှာစာပေါ်နံပါတ်များနှင့်အက္ခရာများ၏ရှည်လျားသော string ကိုဖြစ်ပါတယ်)
တစ်စုံတစ်ဦးကဖုန်းကိုဖွကွေားတဲ့အခါမှာ, သူတို့ကိုသင်ကဆရာဝန်တစ်ဦးကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ကြောင်းသိစေနှင့်သင်ရက်ချိန်းအချိန်စာရင်းချင်. သငျသညျကကဘာလဲဆိုတာရှင်းပြဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. သင်တစ်ဦးစကားပြန်ရှာတွေ့မှသူတို့ကိုမလိုအပ်ခဲ့လျှင်, ယခုအကူအညီတောငျးဖို့ကောင်းတစ်ဦးအချိန်ဖြစ်ပါသည်.
ဆရာဝန်၏ရုံးခန်းမှာလူတစ်ဦးသင်နှင့်သင့်ကျန်းမာရေးအာမခံနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများမေးပါလိမ့်မယ်. သူတို့ကသငျသညျရက်ချိန်းအချိန်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်. ကြောင်းသင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးအချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျဟုတ်ကဲ့ပြောနိုင်နှင့်သင့်ချိန်းစီစဉ်ထားပါလိမ့်မည်. သူတို့ပူဇော်အချိန်ကိုသင်တို့အဘို့ကောင်းသောမပါလျှင်, ချက်ချင်းသူတို့ကိုပြောပြ, သူတို့သင်တို့အဘို့ သာ. ကောင်း၏အခြားအချိန်များအတွက်ကြည့်ရှုမည်.
အချိန်ကိုရေးချ, နေ့စှဲ, နှင့်ချိန်း၏လိပ်စာ.
အတော်များများကဆရာဝန်များကတင်းကျပ်ဖျက်သိမ်းခြင်းမူဝါဒများရှိ, သူတို့ကနောက်ဆုံးမိနစ်မှာ cancel လျှင်သူတို့သည် လာ. သို့မဟုတ်မကြပါလျှင်လူနာချိန်းများအတွက်ပေးဆပ်ရန်ရှိသည်ဘယ်မှာ. လည်း, လူနာကိုပယ်ဖျက်ဖို့တောင်းဆိုမပါဘဲလည်းအများကြီးချိန်းလွဲချော်လျှင်, ကြောင်းလူနာကြောင်းရုံးမှာကြိုဆိုမကျမည်အကြောင်း.
သငျသညျရက်ချိန်းမနိုင်လျှင်နှစ်ရက်မတိုင်မီမခေါ်ဖို့ကြိုးစားပါ. တောင်မှတဦးတည်းရှေ့ဆက်တစ်ရက်သို့မဟုတ်ထိုနေ့မှာအားလုံးတောင်းဆိုမဟုတ်ထက် သာ. ကောင်း၏. သင်သည်သင်၏ချိန်းမတိုင်မီအနည်းဆုံးတနေ့မခေါ်လိုလျှင်, သင်တစ်ဦးဖျက်သိမ်းခြင်းအခကြေးငွေကိုရှောင်ရှားပါလိမ့်မယ်.
သင်ဆရာဝန်ကိုသွားသည့်အခါ, အချိန်ပေါ်တက်ပြပါသို့မဟုတ်သင့်ရက်ချိန်းများအတွက်အစောပိုင်း. အများအားဖြင့်, သင်ရုံးကိုသင်တို့ရှေ့မှာအခြို့သောပုံစံများကိုဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်. သင်တို့သည်ဤပုံစံများအတွက်ရေးသားဖို့အဘယ်သို့သောအကြောင်းရှုပ်ထွေးနေဆဲပါလျှင်, သငျသညျမိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုမေးလို့ရပါတယ်, ဆွေမျိုး, ဒါမှမဟုတ်ရုံးဧညျ့ကွိုသင်ကူညီ.
သတိရ, သင်သည်သင်၏ချိန်းများအတွက်အလွန်နှောင်းပိုင်းကလျှင်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အချိန်ကွာပေးထားမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်နှငျ့သငျဆရာဝနျကိုမြင်ရဖို့ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်. နှောင်းပိုင်းတွင်ဖြစ်ဖို့မကြိုးစားပါ!
သင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကိုမြင်သောအခါသင်နှင့်အတူယူဆောင်လာရန်ရှိသည်ဆိုမေးခွန်းများကိုရေးချ. သင့်ရဲ့ချိန်းဆိုမှုစဉ်အတွင်း, သင်လေ့လာသင်ယူရာပေါ်မှတ်စုယူနိုင်ပါသည်. သငျသညျမှတ်စုယူသင်တို့နှင့်အတူရှိမိသားစုဝင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ်ဆောင်ကြဉ်းပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်. သင်ရှိသည်မေးခွန်းတွေမေးနှင့်သင့် provider ကပြောရှိပါတယ်အဘယျသို့နားထောငျပေါ်တွင်သင်၏အာရုံစိုကျနိုငျသောလမ်း.
ထပ်ခါတလဲလဲခံရဖို့တစ်ခုခုမေးရန်ရှက်ဖြစ်မနေပါနဲ့. သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ချိန်းဆိုမှုတစ်ဦးအကျဉ်းချုပ်နှင့်သင်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆေးညွှန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ရေးသားဖို့ဆရာဝန်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်နားလည်သေချာစေရန်သတင်းအချက်အလက်များဘာသာပြန်ဆိုမိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုမေးလို့ရပါတယ်. သင်ဆဲမေးခွန်းများရှိပါက, သင်သည်သင်၏ချိန်းပြီးနောက်ဆရာဝန်၏ရုံးခန်းမှာသူနာပြုခေါ်နိုင်ပါတယ်.
သင့်ရဲ့ပံ့ပိုးပေးမယ့်ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုစေ, သငျသညျထိခိုက်တိကျတဲ့နာမကျန်း၏မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကရောဂါလက္ခဏာတွေကိုလုပ်ပြီးပြီသင်သည်အဘယ်ကြောင့်နားလည်သေချာပါစေနှင့်သင်နာမကျန်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူကူညီရန်အရင်းအမြစ်များကိုအကြံပြုဖို့သူတို့ကိုမေးဖို့. ရောဂါအကြောင်းကိုဘာသာပြန်ထားသောသတင်းအချက်အလက်ကိုတက်ကြည့်ဖို့သူတို့ကိုမေးကြည့်ပါ.
တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအောင်, သင့်ရဲ့ပံ့ပိုးပေးသင့်လက်ရှိနှင့်အတိတ်ကျန်းမာရေးသမိုင်းနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများမေးပါလိမ့်မယ်. သငျသညျရိုးရိုးသားသားနှင့်တိကျစွာဤမေးခွန်းများကိုဖြေကြားကြောင်းအရေးကြီးသောဒါဟာင်. သငျသညျပေးသတင်းအချက်အလက်များသင်ရရှိသည့်စောင့်ရှောက်မှုကိုညွှန်ကြားကူညီပေးပါမည်.
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်အတွက်အရေးပါသော link ကိုဖြစ်ကြောင်းကိုသတိရပါ. သငျသညျနောကျတကြွလာအဘယ်သို့သောအကြောင်းရှုပ်ထွေးနေဆဲပါလျှင်, နောက်တဖန်ရှင်းပြဖို့အစီအစဉ်ကိုတောင်းခံ. သင်တို့သည်လည်းမည်သည့်အနာဂတ်ချိန်းများအတွက်အစီအစဉ်နှင့်ရက်စွဲကိုချရေးခြင်းငှါသူတို့တောငျးဆိုနိုငျ. သငျသညျအိမ်ပြန်တစ်ချိန်ကဆိုမေးခွန်းများကိုပေါ်ထွန်းလျှင်သင်ကသူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါနိုင်အောင်သင်သည်သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်သေချာအောင်လုပ်ပါ.
ရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာရုံးလိုပဲ, သင်တစ်ဦးဆေးရုံများတွင်စောင့်ရှောက်မှုများအတွက်ဆရာဝန်ကိုသွားလျှင်, သင်သည်သင်၏စောင့်ရှောက်မှုများအတွက်အစီအစဉ်ကိုနားလည်ရန်လိုအပ်. ဆေးရုံများကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ဍအမှုဆောင်များစွာသောလူနှင့်အတူကြီးမားတဲ့န်ထမ်းများ, သို့သော်သင်ဖို့တာဝန်ဆရာဝန်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အခြားပံ့ပိုးပေးသူရှိပါလိမ့်မည်. ဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုသင့်ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုများအတွက်နောက်ဆုံးမှာတာဝန်ရှိသည်နှင့်အသငျသညျကိုသူတို့နေသောကိုသိရန်လိုအပ်. သင်လည်းတစ်ဦးသူနာပြုတာဝန်ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်. သူနာပြုများအံ့သြဖွယ်အရင်းမြစ်များဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကိုသင်သင်ရှိသည်မဆိုမေးခွန်းများမေးရန်အခမဲ့ခံစားရသင့်တယ်.
အဓိကစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကိုရွေးချယ်ပါ. သင်နေမကောင်း get လျှင်ဒီကသင်၏အဓိကဆရာဝန်နှင့်သင်များသောအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးသွားပါပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည်.
သငျသညျသစ်တစ်ခုဆရာဝန်ကိုတွေ့မြင်ရှိပါက, သင့်ရဲ့အာမခံခရီးစဉ်များအတွက်ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကသင့်ရဲ့အာမခံကွန်ယက်များမှာသေချာအောင်. ဒါဟာသင်မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးသောမေးလ်ထဲမှာကြီးမားတဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုလက်ခံရရှိမှရှောင်ရှားရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်.
ဘာသာစကား access ကို
သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်နှင့်အတူလွယ်ကူစွာဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ပါလိမ့်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်. သင်သို့မဟုတ်မိသားစုဝင်တစ်ဦးကြောင့်ဘာသာစကားမှဆရာဝန်၏ရုံးခန်းမှာအခက်အခဲရှိခြင်းလျှင်, သင်အမြဲစကားပြန်ဘို့တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်. အများစုမှာဆရာဝန်၏ရုံးများနှင့်ဆေးရုံများကိုသင်ကူညီနိုင်သူလူတစ်ဦးအတွက်သို့မဟုတ်ဖုန်းကိုတခုတခုအပေါ်မှာစကားပြန်မရနိုင်ပါလိမ့်မည်.